Goos goos ku saabsan ciyaaraha Ingiriiska - BBC News Somali
Goos goos ku saabsan ciyaaraha Ingiriiska
23 Maajo 2015
Image caption astaanta Horyaalka Ingiriiska ee Premier League-ga
Maanta ma ay jiraan ciyaarihii Horyaalka Ingiriiska, oo dhammaan kulamada Horyaalka Ingiriiska waxaa la dheeli doonaa maalinta berita ah hadduu Alle idmo, markaasi oo la soo gebagabeyn doono Horyaalka Ingiriiska ee xilli ciyaareedkan.
Balse maalin ka hor ciyaarta kama dambeysta ah ee horyaalka Ingiriiska ee 2014/2015 ayaa waxaa hadlay tababare Mourinho.
Image caption Tabaraha kooxda Chelsea Jose Mourinho
Tababaraha kooxda Chelsea Jose Mourinho ayaa sheegay in uusan iskii uga tegi doonin kooxda dhawaantan ku guulaysatay Horyaalka Ingiriiska ee Chelsea, balse uu diyaar u yahay in uu maamulo koox kale oo ka dheesha Horyaalka Ingiriiska.
Mourinho, oo ah 52 jir, ayey u tahay markii labaad oo uu layliyo kooxda Chelsea, isagoo 2013-kii kaga soo biiray kooxda ku dheesha garoonka Stamford Bridge kooxda Real Madrid.
Markii hore waxa uu layliyay kooxda Chelsea intii u dhaxaysay 2004-tii ilaa 2007-dii, markaasi oo uu xumaaday xiriirkii kala dhaxeeyay milkiilaha kooxdaasi ee Roman Abramovich.
Image caption Goolhayaha kooxda Manchester United, David De Gea
Dhanka kale, tababaraha kooxda Manchester United Louis van Gaal ayaa sheegay in uu ku rajo weyn yahay in uu kooxda ku sii hayn doono goolhaye David De Gea.
Goolhayahan oo soo bandhigay ciyaaro ciyaaro dhaafay ayaa waxaa saxiixiisa baadi goob ugu jirto kooxda Real Madrid.
Ciyaaryahankan ayaa qandaraaska uu kula joogo kooxda ku dheesha garoonka Ol Trafford waxaa uga harsan hal sano oo kaliya.
24 jirkan ayaa gacanta u haatinyay taageerayaasha kooxda Manchester United kaddib markii uu garoonka uga baxay dhaawac soo gaaray awadeed ciyaartii ay kooxdiisa barbaraha 1-1 la galeen kooxda Arsenal.